အမဲသားအဆုတ်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Промытое нарезанное легкое варят в течение 1 часа, периодически снимая пену. Говяжье — с луком, лавром, перцем, солью. Свиное — в подкисленной уксусом воде (на 1,5 л воды —2ст.л. ရှလကာရည် и специи,соль).
အမဲသားအဆုတ် ငါချက်ပြုတ်ကြဘူး, သင်မူကားနှစ်ဆယ်မိနစ်ပြုတ်ပြီးတော့, Patti သို့ minced အမဲသားကိုအောင်ပြောပါဖို့လိုအပ်သည့်အခါ။ varish ကြာကြာသူတို့ကအရသာမရှိသောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်။ ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာကြက်သွန်ဖြူနှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်၏နှစ်ခုလေးညှင်းပွင့, ရေနံစိမ်းကြက်သွန်ထည့်ပါ။ သင်တစ်ဦးလေးညှင်းပွင့မွှေးငရုတ်ကောင်းပစ်နိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကိုတွင်, (ကမ်းလှမ်းမှုကိုကနေနာရီ 253မိနစ်ချက်ပြုတ်ရန်) အမဲသားအဆုတ်ချက်ပြုတ်အကြောင်းအများကြီးဖတ်နေပေမယ့်သတင်းအချက်အလက်ဒါကွဲပြားခြားနားသည်ခဲ့တာငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကကူညီလိမ့်မယ်, ငါ့ချက်ပြုတ်အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
အလင်း၏ဖန်ဆင်းသုပ်ကိုအလွန် ချစ်. , ဒါပေမယ့်ကြောင်းရှေ့၌ငါဖွင့်ငါ့အမိချက်ပြုတ်, ယခုအရှိဆုံးမိသားစုနှစ်သက်လိုချင်ကိုစားကြ၏။ ယေဘုယျအားဖြင့် 30-40 မိနစ်လွယ်ကူသောချက်ပြုတ်ပြီးနောက်, ငါကထွက်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, တကအလွန်ခက်ခဲတဲ့နှင့်ထင်ရသော undercooked လျှင်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမှထွက်လှည့်။ ငါကအင်တာနက်ထဲကနေအကြံဉာဏ်ကိုနားထောင်, တဖန်ပြုတ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Так вот время приготовления легкого оказалось 1,5 —2часа. После этого времени легкое было мягким и сочным, то есть самое оптимальное время приготовления.
ကျနော်တို့သာ mince အပေါ် pies များအတွက်အမဲသား lgkoe ချက်ပြုတ်။ အဖုံးနှင့်အတူအနိမ့်အပူတွင်ပိတ်လိုက်, သူတို့သည်တစ်နာရီခန့်မျှတည်ထားပါသင့်ပါတယ်။
А жарим мы их — сразу на сковородку и 15 — 20 минут с ကြက်သွန်နီ.
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,434 စက္ကန့်ကျော် Generate ။